५ श्रावण २०७५ | July 21, 2018
​मुटुरोगको समस्या कम गर्न पिउनुहोस् कफी
Monday,4Sep, 2017 6:49 PM
के तपाई कफी पिउनुहुन्छ ? यदि पिउनुहुन्छ भने तपाईंको लागि यो खुसीको खबर हुन सक्छ । हालै गरिएको एक अध्ययनले दिनमा ४ कप कफी पिउने मानिसहरुलाई मुटु रोगको समस्या कम हुने कुराको खुलासा भएको छ । २० हजार मानिसहरुमा गरिएको उक्त अनुसन्धानले यो तथ्य फेला पारेको छ ।
‘एम्पेरियल कलेज लण्डन’का अनुसन्धानकर्ताहरुले अध्ययनको समयमा कफी पिउनाले शरीरको रोग प्रतिरोधकत क्षमता बढ्ने पाइएको छ । यो मुटुको लागि राम्रो हुनुको साथै यसको सेवनले क्यान्सर रोग बाट पनि बचाउछ ।
अनुसन्धानकर्ता र काडियोलोजिस्ट डा. अडेला नावोर्रोले मानिसहरुलाई धेरै कफी पिउनको लागि सल्लाह समेत दिएका छन् । जसकारण मानिसहरुको मुटु स्वस्थ हुन्छ ।
यो अध्ययन २० हजार मानिसहरुमा १० बर्षसम्म गरिएको थियो । साथै यो बाहेक गत महिना ५२ हजार मानिसहरुमा गरिएको एक अध्ययनमा काफी कलेजोको लागि पनि स्वस्थकर रहेको पाइएको छ ।
कफीमा धेरै किसिमका यौगिक पाइन्छ, जुन शरीरको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै एन्टीअक्सीडेन्ट भएर काम गर्छ । तर पनि अनुसन्धानकर्ताहरुले धेरै कफी नपिउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
यूरोपियन फुड सेफ्टी एजेन्सीले दिनमा एउटा व्यक्तिले ०.४ ग्राम भन्दा बढी कफी पिउनु हानिकारक हुने पनि बताएका छन् । यदि तपाईं एस्प्रेस्सो कफी पिउनु हुन्छ भने दिनमा ५ कप र यदि तपाईं इंस्टेंट कफी पिउनु हुन्छ भने दिनमा ४ कप कफी पिउन सक्नुहुन्छ ।
​कथा : बादशाहको नयाँ लुगा
​संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण आवश्यक :सभामुख महरा
४ साउन, काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन् । जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चले आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध र दिगो विकास’ सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्ले धेरै कानूनहरु बनाउनुपर्ने दायित्व रहेको बताएका हुन् ।“संविधान कार्यान्वयनका लागि
​नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग गर्न अष्ट्रेलिया इच्छुक
४ साउन, काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । ऊर्जामन्त्रालयमा शुक्रबार भएको शिष्टाचार भेटमा ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । भेटमा मन्त्री पुनले आफु ऊर्जा मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेसँगै ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रको समग्र विकासका लागि श्वेतपत्र जारी गरेको जानकारी दिँदै
​अमेरिकी राजदूत टेप्लिज र प्रचण्ड बिच भेटवार्ता
४ साउन, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) का अध्यक्ष प्रचण्ड र अमेरिकी राजदूत एलाइना बी—टेप्लिजका बिच शुक्रबार विहान खुमलाटार निवासमा भेटवार्ता भएको छ ।भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले टेप्लिलाई उनको कार्यकाल सफल भएको बताउदैँ उनले खेलेको भूमिकाले नेपालको विकास र प्रगति सकारात्मक रहेको बताए ।प्रचण्डले भने,“नेपालको शान्ति प्रत्रिया र समग्र राजनीतिक स्थायीत्वमा अमेरिकी सरकारको सहयोग र सद्भाव
५ वर्षका बालक, जसले आफैँ लेखे आफ्नै मृत्युको सन्देश
२ साउन, काठमाडौं । पूर्वजानकारी पाएर मृत्युलाई स्विकार्न जोकसैको आँटले सक्दैन । उमेरले जीवनको उत्तरार्धतिर लागेकाहरु पनि यस्तो क्षण सहज रुपमा बिताउन सक्दैनन् । तर, अमेरिकाका एक पाँच वर्षीय बालकले आफ्नो मृत्युको पूर्व जानकारी पछिको यात्रा सजिलोसँग पार गरेका छन् । उनी हुन् ग्यारेट मिथायस ।
प्रधानमन्त्री छँदा चढेको हेलिकोप्टरमै चढेर १० वर्षका लागि जेल जाँदै शरीफ, फर्किए पाकिस्तान
समाचार सूत्रका अनुसार न्याबले नवाज र मरियमलाई अदियाला जेल लैजानका लागि गृह मन्त्रालयसँग हेलिकोप्टर मागेको थियो । मन्त्रालयले संस्थालाई त्यही हेलिकोप्टर दियो, जुन प्रधानमन्त्रीका लागि रिजर्भ राखिन्छ । अर्थात् नवाज कुनै बेला जुन हेलिकोप्टरमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा देशभरी घुमिरहन्थे अहिले त्यही हेलिकोप्टरमा चढेर उनी जेल जाने भएका छन् ।
२९ असार, काठमाडौं । चीनको सिचुवान प्रान्तमा रहेको एक औद्योगिक पार्कमा विस्फोट हुँदा १९ जनाको मृत्यु भएको छ । १२ जना घाइते छन् । चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्हृवालाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले यिविन हेन्दा टेक्नोलोजीले सञ्चालन गरेको रसायनिक भट्टी विस्फोट भएको जनाएका छन् । तर विस्फोट के कारणले भयो भन्नेबारे भने केही पनि खुलाइएको छैन । ​विष्फोटपछि ठूलो आगलागी भएको र आकाशमा फैलिएको धुँवाको